Hrithik Roshan Oo Ka Yaabiyay Naag Wariye ah Oo Wareysi La Yeelaneysay. - iftineducation.com
aadan21 / February 10, 2012
iftineducation.com – Hrithik Roshan Jilaaga weyn ee ay dumarka sida weyn u jeceylhiin qaabka uu u jilo Filimka ayaa war aan laga fileynin ka soo yeerey kadib markii gabar Wariye ah wareysi dheer la yaalatay.
Hrithik Roshan oo inti lagu guda jirey wareysgia ay waydiisay Wariyaha su,aal aheyd “Maxaad dareentaa marka aad shuminayso gaar ahaan marka uu heesaha degan la qaadayo Priyanka Chopra ayaa waxa uu jawaab aan la filynin siiyay gabadhii su,aalaha weydinaysay oo ka yaabisay.
“Hadii aad is leedahay marka aan wax shuminayo in uu dareenkayga kacayo siiba Priyanka Chopra aniga wax dareen ah malihi hadalkisa ku soo gababaeyay.
Wariyaha ayaa waxay ku celisay su,aal u dhow ee aheyd maxa dhacey ee aadan dareen lehen mise mataqaanid sida shumiska macaan loo shumiyo dumarka ?Hrithik Roshan oo ka carooday su,aashaasi ayaa ku jawaaby “Hadii aad u maleysay inaan garan karin sida dadka loo shumiyo kaalay aan ku baree shumiska jawabtaasi oo si weyn ay ula yaabtay Wariyahi wareysiga ka qaadaysay.
Si kastaba ha ahaate Jilaaga ayaa ereygaas ku tilmaamay inuu ula jeeday kaftan iyadoo markii dambe raaligalin ka bixiayay,Hrithik Roshan ayaa waxa uu ka mid yahay jilayaasha sida aadka ah loogu jeceylyahay Boolywoodka iyadoo sanadan 2012 ka la filayo inu keeno Filimo ka turjumaya qisooyin jeceyl.